धनुषाधाम नगरपालिकालाई लक्षित गरी प्रेसरकुकर बम विस्फोट - नेपालबहस
धनुषाधाम नगरपालिकालाई लक्षित गरी प्रेसरकुकर बम विस्फोट
धनुषा । धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम नगरपालिका कार्यालयलाई लक्षित गरी प्रेसरकुकर बम विस्फोट भएको छ । गरपालिकको वडा नम्बर ३ स्थित पुरानो धर्मशाला पूर्वपट्टी रहेको नगरपालिकाको सभाहलको पर्खालमा बमले क्षति पुर्याएको छ । धनुषाधाम प्रहरीका अनुसार गए राति ९ः३० बजेको समयमा बिस्फोट भएको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ ।
Previous articleआइएमई लिमिटेडको सेवा १९औं वर्षमा प्रवेश, ७० जनाले गरे रक्तदान
Next articleकुमारी बैंक र ह्याम्स्बीच किन भयो सम्झौता ?
अबैध क्रसरले बीपी राजमार्ग जोखिममा
लुकाई–छिपाई राखेको अवैध युरिया मल बरामद
आक्रामक स्वभावका इन्सपेक्टर लागुऔषध ब्युरोको ‘अनुसन्धान’ घेरामा
धार्चेमा भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ
नेपालका २१ हिमताल फुट्ने खतरामा !
प्रहरीका डीएसपी सिंहलाई भ्रष्ट्राचार मुद्दा